အန်းဒရွိုက် | November 2019
Advertising ကြော်ငြာအများအပြားအသုံးပြုသူများအကြှနျုပျတို့ခတျေ၏အမှန်တကယ်ဘေးခံစားရသည်။ တကယ်ပဲ - bandwidth ကိုနှင့်သင့်ကိရိယာ၏အရင်းအမြစ်များကိုတစ်ဦးစွန့်ပစ် - ပိတ်သိမ်းမရနိုငျသောမျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှာနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ, impervious ဗီဒီယိုများ, မျက်နှာပြင်တဝိုက် running မယုံနိုင်လောက်အောင်နှောင့်အယှက်အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်အများဆုံးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်၏။ ဒီမတရားသဘောထားကိုတိုက်ဖျက်ရန်နှင့်ကြော်ငြာ-ပိတ်ဆို့ခြင်းဆော့ဖျဝဲအမျိုးမျိုးဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်။
ဘယ်လိုက Android အတွက်တောင်းကိုရှာပြီးအဲဒါကိုရှင်းလင်းဖို့
အများစုမှာ desktop ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်များ, မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေရဲ့သိုလှောင်မှု၏ function ကိုပြည့်အရာတို့ကို "အမှိုက်ပုံးထဲသို့" သို့မဟုတ် analog လို့ခေါ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းရှိ၏ - သူတို့ထိုအရပ်မှ restore, ဒါမှမဟုတ်အပြီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ။ Google ထံမှမိုဘိုင်း operating system ကိုအတွက်ဒီ Element တစ်ခုရဲ့ရှိပါသလား? ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ပေးအဖြေ။
အန်းဒရွိုက်အပေါ် clipboard ထံရှင်းလင်း
ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးက Android operating system ကိုအပေါ်ကို clipboard နှင့်မည်သို့သူတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျနော်တို့ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ။ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် operating system ကိုဒြပ်စင်သန့်ရှင်းစေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုချင်တယ်။ အချို့ဖုန်းများပေါ်တွင် clipboard ထံရဲ့ contents ဖယ်ရှားခြင်း, အဆင့်မြင့် clipboard ထံစီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်တွေရှိပါတယ်: ဥပမာ, Samsung က firmware ကို TouchWiz / ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း UI ကို။
မိုဘိုင်းဖုန်းများမှာစတင်မိတ်ဆက်ပထမဦးဆုံးအပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များတစ်ယောက်သောစကားသံကိုအသံဖမ်းတဲ့ function ရှိပါတယ်။ ခေတ်မီစက်တွင်အသံဖမျးပြီးသားတစ်ဦးချင်းစီပလီကေးရှင်းပုံစံ, ဆဲပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ အတော်များများကထုတ်လုပ်သူ firmware ကိုထိုသို့သော software ကိုဖြည့်စွက်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ Third-party ဖြေရှင်းချက်များအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်ခဲ့သည်။
Android ပေါ်မှာ QR-code ကို scan လုပ်နည်း
Android ပေါ်မှာအခြေစိုက်မိုဘိုင်း device ကိုမဆိုအသုံးပြုသူအစဉ်အဆက်ဖို့အတွက် QR-codes တွေကိုကြား၏ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးသမရိုးကျဘား codes တွေကိုဆင်တူသည်: ဒေတာကိုသူတို့ကအထူးက devices ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည့်ပြီးနောက်ပုံရိပ်တွေ၏ပုံစံနှစ်ခုရှုထောင်ကုဒ်အတွက် encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ QR-code ကိုမဆိုစာသားကို encrypt လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤအ codes တွေကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်အဘို့, သင်သည်ဤဆောင်းပါး၌လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Android ပေါ်မှာစာသားရဲ့ဆုံးမပဲ့ပြင်ကို enable သို့မဟုတ် disable လုပ်နည်း
အဆင်ပြေဘို့, စမတ်ဖုန်းနှင့် Android tablet များစာရိုက်ကီးဘုတ်စမတ် entry ကို function ကိုတပ်ဆင်ထားကြသည်။ အဆိုပါတွန်းအားပေး-button ကိုပစ္စည်းတွေမှာ "T9" ကိုနိုင်ဖြစ်ခြင်းမှနေသားတကျနေသော users ရုံကို Android ပေါ်သောစကားဖြင့်အခေတ်မီစစ်ဆင်ရေးကိုပဌနာကိုဆက်လက်။ ဤအင်္ဂါရပ်နှစ်ခုစလုံးဒါနောက်ပိုင်းတွင်ဤဆောင်းပါး၌ကြှနျုပျတို့ / ခေတ်သစ်ကိရိယာများပေါ်တွင်ကို disable ဆုံးမခြင်း mode ကိုစာသားမဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်, အလားတူရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။
တခါတရံသူကအသုံးပြုသူတစ်ဦးမတော်တဆအန်းဒရွိုက် running သင့်ရဲ့ဖုန်း / Tablet ကိုထံမှအရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုဖျက်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒေတာတွင်စနစ်အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး system ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတခုအတွင်းပျက်စီး / ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာသူတို့ထဲကအတော်များများပွနျလညျထူထောငျနိုငျသညျ။ သငျသညျကို Android စက်ရုံတွင် settings ကိုမှ reset နှင့်ယခုအပေါ်ယခင်ကသောဒေတာများပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ကြိုးစားနေသည်ဆိုပါကဤအမှု၌သတင်းအချက်အလက်များဘယ်သို့ဖျက်ပစ်ပါသည်အတိုင်း, ပြီးတော့, သင်သည်အောင်မြင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Android ပေါ်မှာသတိပေးချက်များကိုဖန်တီးရန် Applications ကို
Android အတွက် GPS စနစ်-tracker
အစပိုင်းတွင်အဆိုပါ GPS စနစ်-ခြေရာခံသင်မြေပုံပေါ်တွင်အကျိုးစီးပွားတ္ထုကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည့်အထူးခရီးဆောင်ကိရိယာဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ယနေ့စမတ်ဖုန်းအများအပြားအတွက် GPS စနစ်နည်းပညာ၏ installation နှင့် ဆက်စပ်. ယခု Android အတွက်အထူး applications များထဲကတစ်ခုစဉ်းစားရန်လုံလောက်ရှိပါတယ်။
Google Play စ Market က
အန်းဒရွိုက်၏ပေါ်ပေါက်ရေးလူကြိုက်များ app ကိုစတိုးဆိုင်ကိုဖန်ဆင်း - အသုံးပြုသူများကိုဝယ်လို့သို့မဟုတ်ပဲမဆို app ကိုကြိုက်တယ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ထားတဲ့အတွက်အထူးဝန်ဆောင်မှု။ ဒီလိုမျိုး၏အဓိကဝန်ဆောင်မှုဖြစ်နှင့် Google မှ Market က Play ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် - အပေါင်းတို့၏အကြီးဆုံး "စျေးကွက်" ။ သူသည်အဆိုတဲ့အချက်ကိုငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူယနေ့ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်စကားပြောပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အန်းဒရွိုက် OS ကိုထောက်ပံ့သည်ဗီဒီယို file format
အန်းဒရွိုက် operating system ကို, မိုဘိုင်း device များအတွက်တစ်ဦးဗားရှင်းအဖြစ်နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ဘို့န်းကျင်ခဲ့သည်, ထိုကာလအတွင်းမှာကအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, သိသိသာသာမာလ်တီမီဒီယာအပါအဝင်ထောက်ခံဖိုင်အမျိုးအစားများ၏စာရင်းကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက်ဤဆောင်းပါးကိုငါတို့သည်သောဗီဒီယိုကို formats နေ့စွဲဤ operating system ကိုကထောက်ခံနေကြတယ်ဆိုတာကိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
Android ပေါ်မှာထပ်တူအမှားအယွင်းများကို Google-အကောင့်ဖြေရှင်းရာမှာ
ယင်းချိတ်ဆက် Google က-အကောင့်မရှိဘဲစိတ်ကူးရန်ခက်ခဲ Android-devaysa အပေါငျးတို့သလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုခြင်း။ ထိုကဲ့သို့သောအကောင့်တစ်ခု၏ရှေ့တော်မှောက်ကိုသင်ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားဖြစ်န်ဆောင်မှုများအားလုံးမှ access ကိုပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဆာဗာများမှဒေတာများပေးပို့နှင့်ခံယူသော operating system ကို၏ဒြပ်စင်၏တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးသေချာနေသည်သာ။
တယောက်ကိုတယောက်ကို Android ကနေဒေတာတွေကိုလွှဲပြောင်း
ခေတ်သစ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်လျင်မြန်စွာပေါရာဏဖြစ်လာနေကြတယ်, နှင့်သုံးစွဲသူများကိုမကြာခဏအသစ်တခုကိရိယာဒေတာကိုလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြသည်။ ဒါဟာနည်းလမ်းများစွာအတွက်တရားမျှတစွာလျင်မြန်စွာပင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အဆန်းမဟုတ်ပါက Android OS ကိုအတူစက်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုအကူးအပြောင်းမှုအတွက်အခြားလိုအပ်ချက်တစ်ခုက Android ကနေဒေတာတွေကိုပြောင်းရွှေ့။
သင့်ရဲ့ Samsung ကပေါ်လက်စွပ်သေံချိန်ညှိခြင်း
Method ကို 1: အထွေထွေ device ကို setting များကိုအောက်ပါပြုဖုန်းရဲ့ setting များမှတစ်ဆင့်လက်စွပ်သေံပြောင်းလဲပစ်ရန်။ အဆိုပါလျှောက်လွှာ Menu ထဲမှာဖြတ်လမ်းကနေတဆင့် "Settings" ကိုတံခါးအထဲသို့ဝင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကုလားကာ device အတွက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထိုအခါကို item "အသံ & အသိပေးချက်များ" သို့မဟုတ် "အသံနဲ့တုန်ခါမှု" (device ကို၏ firmware ကိုဗားရှင်းနဲ့မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်) ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
Android အတွက် IPTV Player ကို
IPTV န်ဆောင်မှုများ၏လူကြိုက်များလျှင်မြန်စွာအထူးသဖြင့်စမတ်တီဗီစျေးကွက်၏ထွန်းနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် TV ကိုအခွင့်ကောင်းကို ယူ. ဖြစ်နိုင်သောနှင့် Android ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည် - ဒီရုရှားဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ Alexey Sofronova ထံမှ IPTV Player ကို app ကိုကူညီပေးပါမည်။ playlists နှင့် URL ကို-link ကိုသူ့ဟာသူ, လျှောက်လွှာ IPTV န်ဆောင်မှုပေးမထားဘူး, ဒါကြောင့်အစီအစဉ်ကြိုတင်ရုပ်သံလိုင်းစာရင်းထဲမှာလိုအပ်ပါသည်။
Android အတွက် YouTube ကိုဂီတ
Strimingovye န်ဆောင်မှုကိုသူတို့ကဗီဒီယိုကြည့်ရှုဘို့ရည်ရွယ်နေကြသည်အထူးသဖြင့်ပါလျှင် ပို. လူကြိုက်များနှင့်သုံးစွဲသူများအကြားဝယ်လိုအားဖြစ်လာနှင့် / သို့မဟုတ်ဂီတကိုနားထောင်နေကြသည်။ ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်အကြောင်းကိုမဟုတ်, ပထမဦးဆုံးရဲ့ features တွေကိုအချို့ကိုမပါဘဲရုံ, ငါတို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးအတွက်ကိုဖော်ပြရန်။
PDF ကို-file တွေကို Android ပေါ်မှာဖွင့်ပါ
Format PDF documents တွေအီလက်ထရွန်းနစ်စာအုပ်များဖြန့်ဖြူးဘို့လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာ PDF ကို-စာအုပ်ဖွင့်ဖို့ဘယ်လို - အတော်များများကအသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏတူရိယာဖတ်နေဘို့မိမိတို့က Android-ဟင်းချိုကိုသုံးပါနှင့်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသူတို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌မေးခွန်း? ဒီနေ့ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှလူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်စရာရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေး။
Android အတွက်ဒိုင်ယာရီ fit
လူအတော်များများတစ်ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဦးတည်သွားစေမှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်း, ညာဘက်ကိုစားကြလော့။ အခမဲ့လျှောက်လွှာနဲ့ Fit ဒိုင်ယာရီမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင်ကအချို့သောကာလအတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုတင်ထားရန်နှင့်ရလဒ်များကို၏မှတ်တမ်းများမှသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောင်းလဲမှုများအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြရအောင်။ သင်သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်သောပထမဦးဆုံးအကြိမ်စတင်။
အန်းဒရွိုက်ပေါ်နီးကပ်အာရုံခံကိရိယာကို disable လုပ်နည်း
အဆိုပါနီးကပ်အာရုံခံအခုအချိန်မှာအားလုံးနီးပါးထုတ်လုပ်တပ်ဆင်သောက Android operating system ကို run နေစမတ်ဖုန်း။ ဒါကအသုံးဝင်သောနှင့်အဆင်ပြေနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကကို turn off ဖို့လိုအပ်လျှင်, ပွင့်လင်းက Android OS ကိုကျေးဇူးတင်မဆိုပြဿနာများကိုမပါဘဲလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရုံခံကိရိယာကို disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
ခေတ်သစ်မိုဘိုင်း operating system ကိုဖန်ဆင်းသောအသေးစားတော်လှန်ရေးတစ်ခုမှာအဆိုပါဖြန့်ဖြူးစနစ်၏လျှောက်လွှာများ၏တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, တခါတရံ Windows Mobile အား, Symbian နဲ့ Palm OS ကိုအပေါ်တပ်မက်လိုချင်သောအပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ကစားစရာရတဲ့အခက်အခဲများစရာတွေခဲ့: အကောင်းဆုံးအမှု၌, ငွေပေးချေမှုအချို့အဆင်မပြေနည်းလမ်းနှင့်အချိန်၌အဆိုးဆုံးနှင့်အတူတရားဝင်က်ဘ်ဆိုက် - အတင်းအကျပ်ပင်လယ်ဓားပြ။